Global Voices teny Malagasy · 14 Jolay 2018
14 Jolay 2018
Tantara tamin'ny 14 Jolay 2018
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana14 Jolay 2018
Araka ny tatitra tamin'ny haino aman-jery, imbetsaka torana noho ny fandoroana azy tamin'ny herinaratra (taser) i Mostafa Tabatabainejad, mpianatra UCLA ary avy eo noentina notazonina rehefa tsy nahavita niala ny Laboratoara CLICC tao amin'ny Tranomboky Powell ao UCLA tamin'ny fomba ara-potoana.
Goatemala: Ao anatin'ny kolontsaim-panatanjahantena, ireto misy bilaogy ara-kolontsaina fito
Amerika Latina14 Jolay 2018
Ho an'ireo laharam-pahamehana any Goatemalà, dia tsy maintsy alefa any amin'ny fanatanjahantena ny tsy latsaky ny 3% amin'ny tetibolam-panjakana. Tamin'ny gazety, ny sehatra natokana ho an'ny "fanatanjahantena" dia lehibe kokoa noho ny iray amin'ny "kolontsaina".
Bilaogeran-tsary malaza i Arash Ashoorinia izay efa nahazo ny loka Reporters Without Borders tamin'ny fifaninanana BOBs (Bilaogy Tsara Indrindra) nokarakarain'ny Deutsche Welle fampielezan-tsary Alemàna ny bilaoginy, Kosoof. Nanana fahafahana nitafatafa tamin'i Arash i Hamid Tehrani ato amin'ny Global Voices.